I-Villa Frascati - I-Maison de Maitre à Luchon - I-Airbnb
I-Villa Frascati - I-Maison de Maitre à Luchon
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Tatiana
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Tatiana izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
'I-Maison de Maitre' enhle futhi esanda kulungiswa. Indawo ekahle, esemaphethelweni edolobhana lase-Bagnères-de-Luchon. Ukubuka okumangalisayo kwezintaba ngasePort de Venasque. Kuthule kakhulu futhi kuzungezwe ipaki elihle kodwa lisahamba ibanga ukusuka enkabeni yedolobha kanye nesitolo sokubhaka ngaphandle kwesango.
Indlu inezinhlamvu eziningi futhi nokho ikhululekile kakhulu futhi ilula. Ingadi eyakhiwe kahle futhi iyidamu lokubhukuda kanye ne-spa.
Le ndlu inegumbi lokuhlala elikhulu elinezindawo ezimbili zokuhlala kanye neziko, isifundo, ikhishi elihlome ngokuphelele, i-pantry, igumbi lokuwasha, amagumbi okulala ayisithupha aphindwe kabili kanye namagumbi okugeza amahlanu futhi ilala abantu abadala abayi-12 nezingane ezi-3.
Inengadi enkulu, yangasese, enomgwaqo ovalwe ngesango. Izizathu zehlela phezulu igquma elibheke kancane i-Luchon. Njengoba ishelela phezulu, ingadi ibukeke kahle emazingeni amaningana, iqala ngotshani, bese kuba yidamu lokubhukuda ne-jacuzzi futhi ekugcineni ifinyelele ithafa elisendlini.
ubusuku obungu-7 e- Bagnères-de-Luchon
I-Bagneres-de-Luchon iyidolobhana eliphilayo ePyrenees, elinezindawo eziningi zokudlela ezinhle nezitolo. Imisebenzi eminingi endaweni ezungezile, njenge-paragliding, i-rafting, ukugibela amahhashi, igalofu, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni kanye nezindlela zokuhamba izintaba. Kubathandi bamabhayisikili: i-col de Peyresourde iqala kahle ngaphandle kwesango lethu. Sikude nje ukusuka e-Spain (ngokwesibonelo) nezindawo ezimbalwa zokudlela ezihamba phambili e-Bossost kanye nokuthenga okuningi e-Vielha.